Raysal-wasarihii Farmaajo Eryey Xasan Cali Khayre oo ku Dhawaaqay inuu Yahay Musharax Madaxweyne....
Saturday September 12, 2020 - 22:03:17 in Wararka by Super Admin
Muqdisho(Xogreebnews)- Raysal-wasarihii hore ee Somaliya Xasan Cali Khayre, ayaa ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u taagan xil-ka Madaxweynaha Somaliya, sidaasna waxa uu ku sheegay qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook kasoo u dhigan sidan.
Walaalayaal, waxaan shaki ku jirin in labaatankii sano ee la soo dhaafay ay dawlanimadeennu hore u socotay, tallaabadeeduba ha gaabnaatee. Muddo xileedkii 5aad ee geeddi socodkaas, ummadda Soomaliyeed waxaan ugu soo adeegay mas’uuliyad Ra’iisul Wasaare. Xilkaas oo waxna lagu soo qabtay, Alle mahadii waxna laga soo bartay.
Hadda oo la sugayo hannaan loogu gudbo muddo xileed cusub ee dowladda Somaliyeed, waxaan fikir iyo talo wadaag dheer kaddib halkan idinkula wadaagayaa musharaxnimadayda jagada Madaxwaynaha JFS. Anigoo si dhab ah u fahamsan fursadaha iyo caqabadaha la xiriira hoggaaminta iyo waxqabadka dalkeennu u baahan yahay maanta iyo mustaqbalkaba, waxaan markale isu soo qaddimayaa in aan dadkayga ugu adeego si ay ku dheehan tahay karti, hufnaan iyo daacadnimo.